Fitaterana ny akora fasimainty: hanamboatra fiantsonan’ny sambo ny Base Toliara - ewa.mg
News - Fitaterana ny akora fasimainty: hanamboatra fiantsonan’ny sambo ny Base Toliara
Natao, omaly tany Andaboly Toliara, ny fomban-drazana, nangatahana fitahiana, hananganana ny fiantsonan’ny sambo, ampiasain’ny orinasa Base Toliara. Fotodrafitrasa ilaina hitaterana, hamoahana ny akora fasimainty, trandrahin’ny orinasa ity haorina ity.
Tsy maintsy natao izao fomba izao, namonoana omby efatra, satria nisy ampahany amin’ireo fokonolona tsy nanaiky nananganana izany fiantsonan’ny sambo izany, sady tsy nanaiky ny hiasan’ny orinasa Base Toliara ihany koa. Resy lahatra izy ireo taty aoriana, rehefa nisy ny fifanazavana sy ny fifampiresahana ary ny fombafomba ho fampihavanana koa ity natao ity. Niaiky izy ireo fa tena hitondra fampandrosoana any an-toerana sy hiteraka tombontsoa maro ho an’ny mponina ny fisian’ity orinasa ity.
Tsy manelingelina ny mpanjono
Nanatrika ny fotoana avokoa ny manam-pahefana any Toliara I sy ny manodidina, ny fikambanan’ny mponina any ifotony, ny fikambanan’ny mpanjono, sns. Nilaza ny tale jeneralin’ny Base Toliara, Ramahefarivo Jean Bruno, fa tena mihaino ny hetahetan’ny vahoaka izy ireo, vonona ny hifampiresaka, ary tsy mitady korontana na disadisa.
Nomarihiny fa tsy hanelingelina ny asan’ny mpanjono ny fisian’ity fotodrafitrasa ity. Natao avo, 4m ny haavony, ary mielanelana 24 metatra ny tsatoka. Tsy seranan-tsambo ity haorina ity fa fotodrafitrasa manokana hitaterana ny akora fasimainty mankany anaty sambo. Misy trano fitahirizana ny akora fasimainty, sy karazana tetezana hitaterana ny akora eny afovoan-dranomasina hampidirana azy ao anaty sambo.
L’article Fitaterana ny akora fasimainty: hanamboatra fiantsonan’ny sambo ny Base Toliara a été récupéré chez Newsmada.
Namory ireo mpanolotsaina sy ben’ny Tanàna ho an’i Toamasina I sy II ny lisitra kandidàn’ny IRD, notarihin’ny kandida, Manantsoa Donna Tang, laharana fahatelo eo amin’ny biletà tokana. “Efa hiarahantsika mahita ny ezaka fampandrosoana ataon’ny filoham-pirenena eto Toamasina. Nametraka ny vato fehizoron’ny tetikasa “Miami” sy ny fanamboran-dalana moron-dranomasina “Boulevard, Ratsimilaho, izy. Notokanana koa ny fotodrafitasa maro”, hoy izy ireo. Naneho fahavonana ny hanohy sy hitondra ny hetahetan’ ny isaky ny kaominina ireto kandidà ireto mba tsy hisy intsony ny ho tara. Tsiahivina fa telo ny lisitra hifaninana ato amin’ny faritanin’ i Toamasina. Voalohany eo amin’ny bileta tokana ny MMM. Faharoa ny Vondron’ny mpampianatra mpikaroka etsy amin’ny oniversiten’ i Barikadimy ary fahatelo ny IRD.Sajo L’article Fifidianana Toamasina: raikitra ny propangadin’ny IRD a été récupéré chez Newsmada.